सलमान खान र अजय देवगन सगै फिल्ममा काम गर्दै ! | Namastefilmy.com| Nepali Cinema, News, Gossip ,Articles, Interview, Celebrity, Photo, Songs, Video, More...
Home >> bollywood >> सलमान खान र अजय देवगन सगै फिल्ममा काम गर्दै !
अजय देवगनको चलचित्र ‘तानाजी’ को यती बेला धमाधम सुटिङ भईरहेको छ । चलचित्रको सुटिङ चलिरहदा अजय भने चलचित्रको स्टारकास्टको लागि ब्यस्त रहेका छन् । स्टार कास्टको काम सकिए लगत्तै अजय देवगनले पनि आफ्नो सुटिङ सुरु गर्ने बताईएको छ । फिल्ममा शैफ अली खाँनले नेगेटिभ रोल निभाउदैछन । शैफ अली खाँन सँग सँगै अब फिल्ममा अर्का खाँनको पनि इन्ट्री हुने भएको छ । अर्का खाँन अरु कोही नभई बलिउडका किङ खाँन सलमान खाँन हुन् ।
स्टार कास्ट फाइनल गर्न ब्यस्त रहेका अजयले सलामानलाई फिल्मको लागि फाइनल गरेको खबर बाहिर आएको छ । सलमानले ‘तानिजा’ मा एउटा मह्त्वपूर्ण भिमिका निर्वाह गर्दैछन । उक्त भूमिका दमदार भएको बताईएको छ । ‘तानिजा’ मा सालमानले शिवाजी को भूमिका निर्वाह गर्ने चर्चा रहेको छ ।
यसको लागि अजय एक नामी कलाकारलाई भित्र्याउने सोचमा थिए र उनको नजर सालमानमा परेको हो । अजयले सलमान सँग भेट गरी फिल्म र उनको भूमिका बारे कुराकानी गरेको र सालमानलाई आफ्नो भूमिका पावरफुल लागेको कारण उनले फिल्ममा काम गर्न तयार भएको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएको छ । फिल्ममा सालमानको रोल छोटो भए पनि निकै दमदार रहेको बताईएको छ ।
Previous: चलचित्र ‘ड्रिम गर्ल’ ले प्रचार प्रसारको लागि टिकटक म्युजीकल्ली च्यालेन्ज
Next: ‘गोजी दाम छैन’ लाई १ करोड
चलचित्र ‘न यता न उता’को कमेडी ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
लक्ष्मीनाथ ,शान्तिप्रिय, फूलमानलाई पुरस्कार दीपाश्री र विनोदलाई सम्मान